San Htun's Diary: My Treasure (Tag)
တဂ်ပိုစ့် လေးအားပေးရင်း ..... သီချင်းတွေ အကုန်ကြိုက်လို့အကုန် ဒေါင်းသွားပြီနော် .... ။
sunshine girl စပေါ်ကာစကတည်းက အဲသီချင်းလေးကို သိပ်ကြိုက်တာ။ နားမထောင်ဖြစ်တာတောင်ကြာပီ စန်းထွန်းရေ။
ခုမှ အဲသီချင်းလေးကို သတိရသွားတယ်။ ဂျပန်မှာလေခုချိန်နွေရာသီကုန်တော.မှာ။ ဆောင်ဦးက သိပ်ကြည်နုးဖုို.ကောင်းတယ်။အေးမြမြလေးနဲ.။စန်းထွန်းတုို.နဲ.ရာသီဥတုသိပ်မကွာဘူးနဲ.တူတယ်နော်။
အွန်လိုင်းပေါ်ကနေခင်တဲ. သူလေးဆုိုတော. တဂ်ထားတာလေး ရေးပေးပါ.မယ်နော်။ လောလောဆယ် တစ်လလောက်တော. အကြွေးထူပါရစေ။ဆက်ဆက်ရေးပါ.မယ်နော်။
တခြားသီချင်းဟောင်းတွေဆက်တုိုက်နားထောင်မိသွားတယ် ယူကျုကနေလေ။ အိမ်ကုိုလည်းလွမ်းလိုက်တာ။
ရေးနုိုင်ဘို့ ကြိုးစားမယ်နော်။ မရေးဖြစ်ရင်စိတ်မဆိုးပါနဲ့ နော်။
ဘလော့လေးက ချမ်းချမ်လွန် ( ဘလောဂါ ) တယောက်က ကျူတီက လက်ဆောင်ပေးတာပေ့ါ.....ကိုယ် ကျွှမ်းကျင်တာ ဘာလဲ ကွကိုမေးပြီး ရေလိုက်တာ မီးဖိုချောင်တခုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရလိုက်တယ် ...ဒီထက် ဘာမှ မပိုဖူးထင်တာပဲ ... အစပိုင်းတုန်းကတော့ အိပ်လည်း ဒီစိတ် စားလည်းဒီစိတ် တော်တော် စိတ်နစ်သွားတယ် ... အခုနောက်ပိုင်း စိတ်ဓာတ်က မြေကြီးထဲဝင်လောက်အောင် ကျနေတယ် စန်းထွန်းရေ..... ကိုယ်ကြိုးစားကြည့်ပါဦးမယ် အာမ မခံရဲသလိုဖြစ်နေလို့ :)
တဂ်ပိုစ်လေး ဖတ်လို့ကောင်းလိုက်တာ။ ဥပမာ၊ ဥပမေယျလေးတွေနဲ့။ သစ်ပင်လေးလို၊ ငယ်ကတည်းက ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်လာခဲ့ရတဲ့ ခွေးလေးတစ်ကောင်လို...
စန်းထွန်းရေ... ဆက်သွယ်မှု ဧရိယာ ပြင်ပရောက်နေလို့ မသိလိုက်ဘူး...:))) နောက်တစ်ခါ မရောက်အောင် ကြိုးစားပါ့မယ်နော်... ခွင့်လွတ်... စိတ်မဆိုးကြေး..:)